Izobukeka kanjani imiphumela yebhizinisi ku-2018? | Ezezimali Zomnotho
Izobukeka kanjani imiphumela yebhizinisi ku-2018?
Enye yezinkinobho zokunquma i- stock market kwemvelo kulo msebenzi kunama-akhawunti ebhizinisi avezwa yizinkampani ezisohlwini kwikota ngayinye. Kuyipharamitha yokubaluleka okukhethekile ukuze amanani akho thatha ithrendi eyodwa noma enye. Ngokwezinga lapho abatshalizimali abaningi bathatha leli su eliyingqayizivele lokungena nokuphuma ezimakethe zezezimali ngeziqinisekiso ezengeziwe zokuphumelela. Akumangalisi ukuthi sikhuluma ngenye yedatha ethembeke nenhloso ethe xaxa enikezwa izimakethe zezezimali. Ngakho-ke, akumangazi ukuthi intengo yabo ebhekiswe kaningi incike kulokhu kuhlola ukuthi izinkampani kufanele ziphase kane ngonyaka.
Yebo, imiphumela yebhizinisi yonyaka odlule ibe mihle kakhulu. Ngokuthola ukukhula okucishe kube yi-15% uma kuqhathaniswa nonyaka owedlule. Kodwa-ke, ukwehla kutholakele maqondana nemininingwane yekota yokuqala yokuqala yonyaka. Lapho umsebenzi webhizinisi ikhule ngaphezu kwamazinga angama-20%. Le ngxenye yokuhlaziywa ikhathaza ingxenye enhle yabatshalizimali. Ngomqondo wokuthi bacabanga ukuthi ingxenye enhle yomjikelezo wezomnotho eSpain isivele yehlisiwe. Kuzobaluleke kakhulu ukubheka ukuthi imiphumela yebhizinisi yekota yokuqala yonyaka omusha izoba yini ukukala ukuthi siyini isimo sangempela sezinkampani zaseSpain.
Esinye isici esingahle sibe nomthelela okhethekile kule miphumela umphumela walokho okuthiwa Inkinga yeCatalan. Ngezinga elingagcina lithinte ukubalwa kwezimali kwezinkampani ezibalwe kumholo oguqukayo. Hhayi nje kuphela labo abavela eCatalonia, kepha futhi nabanye abanobudlelwano bezohwebo nale ngxenye yendawo kazwelonke. Kunoma ikuphi, kuzofanele silindele ukuthi kungenzeka yini ngale datha ku-2018. Akumangalisi ukuthi akunqatshelwe ukuthi kukhona ukwehla kuma-akhawunti ezinye zalezi zinkampani. Into engathinta intengo yamasheya ezokwehla kakhulu ngenxa yalolu shintsho kokulindelwe.
1 Ukulindelwa kwemiphumela ngonyaka we-2018
2 Kufanele wenze kanjani?
3 Amasu wokusebenzisa idatha
4 Yini okufanele uyenze ngemiphumela emihle?
5 Ezinye izinzuzo zokusetshenziswa kwayo
Ukulindelwa kwemiphumela ngonyaka we-2018
Kunoma ikuphi, izibikezelo zalo nyaka omusha ziphakamisa ukuthi imingcele yenzuzo izolinganisela. Njengomphumela wokuphela okubanzi komjikelezo wezomnotho otholwayo. Ngalo mqondo, okuvela emnyangweni wokuhlaziywa kweBankinter kuyacaca ukuthi kuseku- isigaba senkunzi emnothweni wamazwe omhlaba. Lesi sici kufanele sisize ukulingana emhlabeni wonke kukhuphuke ebhodini ngalesi sikhathi. Noma kungenzeka ukuthi kuncane kunalokho okwehlele izivivinyo zangaphambilini.
Imiphumela yekota yokuqala izobaluleke kakhulu ekunqumeni ukuvela kwezinto ezizoqokwa ngamasheya aseSpain isikhathi esiningi sonyaka. Kuzoba ngenye yemininingwane abazoyazi kakhulu abatshalizimali abancane nabaphakathi. Kuze kube seqophelweni lokuthi noma yikuphi ukuphambuka ezibikezelweni kungadala ushintsho olungazelelwe kusilinganiso senani. Vele, ngandlela thile futhi lokho kuzokhiqiza lokho ekusebenzeni ungathola imali eningi. Kepha ngesizathu esifanayo, futhi kukushiyele ama-euro amaningi kunesidingo ezindaweni zokuhweba zezezimali.
Kufanele wenze kanjani?
Ukusizakala ngale datha ezophuma ngonyaka we-2018, ngeke ube nokhetho ngaphandle kokungenisa uchungechunge lwamathiphu azosiza kakhulu ukwenza imali oyongele izuze. Lezi ngezinye zezinto ezifanele kakhulu.
Noma ikuphi ukuthuthuka kwesibikezelo okufanele ukusizakale buthelela izikhundla kumanani akhethiwe.
Ungathobela umthetho osho lokho okufanele ukwenze thenga ngamahemuhemu futhi uthengise ngezindaba. Kulezi zimo kukulethela usizo olukhulu ekusebenzeni.
La ukuguquguquka Ezinsukwini ezingaphambi kokushicilelwa kwemiphumela iphakeme kakhulu futhi kuzokusiza ukwazi ukusebenza ngesikhathi esifanayo sokuhweba.
Imvamisa i umlaza Azithinti amanani amaningi emakethe yamasheya kazwelonke futhi yilezo ziphakamiso lapho kuzofanelekile ukufaka engcupheni imali yakho.
Kufanele ukhumbule ukuthi le miphumela yebhizinisi yenziwe kane ngonyaka. Ngakho-ke, uzoba namathuba amaningana ukuze uzuze ngokuhamba ngendlela egculisayo.
Njengamanje sise- Isimo se-bullish ngakho-ke noma yikuphi ukumangala okungalungile kuzojeziswa kakhulu izimakethe zezezimali. Ngezingozi zokuwa okubukhali ezimakethe.
Ungazami ukusheshisa ukusebenza kuze kufike lapho ubhekene nengozi enkulu ye- xhuma kumanani owakhethile kulezo zikhathi. Noma ngaphandle kwakho ukwazi ukulungisa kahle izintengo zokuqala, njengoba ufuna kwasekuqaleni.
Amasu wokusebenzisa idatha
Kunoma ikuphi, ungasebenzisa ngokunenzuzo ukushicilelwa kwemiphumela yolayini bebhizinisi abalwe ku ukukhulisa ukusebenza ezimakethe zokulingana. Ngenhloso ecacile lokho ukwenza inzuzo yonke iminyakazo yakho emakethe yamasheya. Ngamathuba amahle wokuthi ungathuthukisa ibhalansi ye-akhawunti yakho yamanje kusuka kulokhu kuhamba. Ngalezi zenzo ezilandelayo esikuvezela zona ngezansi.
Enye yezinhloso zaleli su ukuba sesimweni esihle soku yenza inzuzo enkulu enkulu kusuka kuleli su elihlukile. Kuzoba yisikhathi samasonto ambalwa lapho kuzodingeka uqoqe amasheya bese uwathengisa ngamanani aphezulu kunalawo acashunwe kuze kube manje.
Isikhathi sokushicilelwa kwemiphumela yebhizinisi singasetshenziselwa hlehlisa izikhundla. Yize lezi zivuma kakhulu ngoba ukulungiswa okungathi sína kungakhiqizwa ukuzama ukulungisa umthetho wokuhlinzeka nokufunwa. Akunandaba ukuthi uphuthelwa ukunyuka okungeziwe okungenzeka kumanani.
Imidiya ekhethekile ivame ukunikeza umkhondo ongajwayelekile wokuthi le miphumela izoba kanjani. Ungasizakala ngaleli qiniso ukuthatha isilinganiso noma esinye ezimakethe zezezimali. Kuzoba yi imininingwane ewusizo kakhulu lokho kungakusiza ekwenzeni imisebenzi yakho emakethe yamasheya ibe nenzuzo Futhi ngale ndlela gwema izingozi ezingadingekile ekuthatheni izikhundla kwezokuphepha ezikhethiwe.
Konke lokho eminye imiphumela ngezansi kokulindelekile kudaliwe kufanele kusetshenziselwe ukulungisa izikhundla ngokushesha okukhulu. Hhayi ize, uzibeka engcupheni enkulu yokuthi ungashiya ama-euro amaningi endleleni. Ngeke ube nesinye isixazululo ngaphandle kokugwema lesi simo esingafunwa ngabatshalizimali abancane nabaphakathi.
Yini okufanele uyenze ngemiphumela emihle?
Uma ekugcineni kwenzeka lesi simo, akufanele wesabe kakhulu ukuvula izikhundla emalini. Hhayi ngeze, kungukuthuthuka kwe- a uptrend wesikhathi esifushane naphakathi. Ngezinketho eziningi zokuthola izinzuzo ngaphandle kwemizamo eyeqile engxenyeni yakho. Okungenani kuze kube usuku olusha lapho imiphumela yekota elandelayo ishicilelwa ngayo. Uzoba nesikhathi esanele sokuphuma kulokhu kuhamba ezimakethe zezimali. Njengoba kwenzekile ngamanye amanani afanele kunkomba ekhethiwe yemakethe yamasheya yaseSpain. Isibonelo, ngeFerrovial noma i-Inditex njengabamele leli su lokutshala imali.
Ngakolunye uhlangothi, ungalinda nokuthi le datha ivele futhi ube nokuvikeleka okukhulu ekusebenzeni ngakunye. Kuyiqiniso ukuthi uzolahlekelwa yingxenye ye- amandla aphezulu, kepha kuzofanelekile ukungazibeki engcupheni ngokweqile ngaphambi kokushintsha okungazelelwe kwentengo. Okuthile ngokungangabazeki okungenzeka kuwe ngaphandle kokusebenzisa leli su eliyingqayizivele. Impela kuzokwenza uzuze imali ekupheleni konyaka. Kokusebenza okukodwa noma okuningi okwenziwe ngalesi sikhathi.
Ezinye izinzuzo zokusetshenziswa kwayo
Ngokuqiniseka konke ukuthi ucabanga ukuthi yiziphi izinzuzo ongazithola kusuka kulelisu kusukela manje. Yebo, kuzoba usizo kakhulu ukuthi ubheke ukuthi yimiphi eminye yale minikelo engakusiza ukuthi uthole imali ethe xaxa ngalezi zikhathi eziqondile. Qaphela ngoba ungayidinga kwesinye isikhathi noma kwenye.
Ingenye yezinhlelo ezisebenza kahle kakhulu ze- vikela utshalomali lwakho. Phakathi kwezinye izizathu ngoba zizovimbela ukunyakaza okungazelelwe phansi. Okungenani amasonto ambalwa lapho lokhu kuthinta intengo yamasheya kuzosebenza khona.
Kungaba yisinyathelo samanani okuhamba ekukhuphukeni kokuvumelana okuthile ukusebenzisa amasu amahle kakhulu okutshala imali. Nge- imajini ephansi yephutha lokho kuzokusiza ukuthi ufeze izinhloso ezilandelwe kusuka kunoma yiliphi igama laphakade.
Ungaphinda le misebenzi ufuna kangaki ukuthi lo msebenzi wedatha ophindwayo kokuvikeleka okuningi okubalwe kumasheya aseSpain. Ngaphandle kwesici sobuchwepheshe ukuthi lezi zimpahla zezimali zikhona ngesikhathi esithile sokushicilelwa kwazo.
Ngosuku olufanayo lokushicilelwa kwalo, a ukuguquguquka okuphezulu ngamanani nokuthi kungaba yisimo esithakazelisa kakhulu kuwe ukuhweba. Lokho wukuthi, sebenzisa ngokuthenga nokuthengisa kuseshini efanayo yokuhweba.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Imikhiqizo yezezimali » Ibha » Izobukeka kanjani imiphumela yebhizinisi ku-2018?
Kungani ivolumu ibaluleke kangaka esikhwameni?
Amathuba ebhizinisi ezimakethe zamasheya zalo nyaka